Relationship Archives - Real Gaming Myanmar
Crush က သင့်ကိုပြန်ကြိုက်လာစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း(၈)မျိုး
Crush က သင့်ကိုပြန်ကြိုက်လာစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း(၈)မျိုး အ ရေး ကြီး တဲ့ အ ချက် တစ် ချက် ပြော မယ် နော် ။ …
စိတ် ချင်း ဆက် သွယ် တယ် ဆို တာ တစ် ဦး နဲ့ တစ် ဦး စိတ် ခံ စား ချက် တူ ညီ တာ ကို ဖော် ပြ နေ ခြင်း ဖြစ် ပြီး စိတ် ခံ စား မှု နီး စပ် တဲ့ ချစ် သူ တွေ ဟာ ပေါင်း ဖက် ရ တတ် ပါတယ်
စိတ် ချင်း ဆက် သွယ် တယ် ဆို တာ တစ် ဦး နဲ့ တစ် ဦး စိတ် ခံ စား ချက် …
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆီမှာ သေချာပေါက် ချစ်သူကောင်လေးကို အသဲယားစေတဲ့ အပြုအမူလေးများ ကိုယ် ချစ် ရ တဲ့ ကောင် မ လေး တွေ ဆီ မှာ …
ကိုယ့်အပေါ် မချစ်တဲ့သူကို စိတ်ထဲမှာ တိကနဲ ပြတ်အောင် အပြတ်ဖြတ်နည်း ကိုယ် ချစ်မိနေတဲ့ တစ်စုံ တစ်ယောက်ဆီ ကနေ အငြင်းခံ လိုက်ရ တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ …
သူ့တစ်ပါး ချစ်ခြင်းကို ခွဲမယ်ဆိုရင် ရလာမယ့် ကံတရားနှင့်အကျိုးဆက်များ (ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတယ်)
သူ့တစ်ပါး ချစ်ခြင်းကို ခွဲမယ်ဆိုရင် ရလာမယ့် ကံတရားနှင့်အကျိုးဆက်များ (ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတယ်) ကုန်းတိုက်တယ်ဆိုတာ ချစ်ခြင်းကိုခွဲတာပါ။ ကုန်းစကားဆိုတာ အချစ်ခွဲစကားပါ။ ချစ်သူ၊ ခင်သူ ၊မြတ်နိုးသူ အချင်းချင်းအချစ်အခင်ပျက် အမြတ်နိုးပျက်အောင်မလိုတမာ ကြားဝင်ပြီး …
Gamer ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ရည်းစားတော်သင့်တဲ့ အချက် (၆) ချက်
Gamer ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ရည်းစားတော်သင့်တဲ့ အချက် (၆) ချက် ဒီခေတ်ကြီးမှာ မိန်းကလေးတွေဟာ လူရည်သန့် မောင်တည်ငြိမ်တွေကိုပဲ မျက်စိကျတော့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်မှာ မျက်စိမပါဘူးဆိုပေမယ့် မြင်နိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ …
အသက် ၃၅ – ၄၀ ပတ်ချာလည်တွေကို ချက်ချင်းဖမ်းပြီး ရည်းစားတော်သင့်တဲ့ အချက် ၁၃ ချက်.
အသက် ၃၅ – ၄၀ ပတ်ချာလည်တွေကို ချက်ချင်းဖမ်းပြီး ရည်းစားတော်သင့်တဲ့ အချက် ၁၃ ချက်. ၁- ဒီအရွယ်တန်းတွေဆိုတာက အနေတော်မှာ ချလိုက်တဲ့ ကုလားပဲအိုးလိုပဲ ။ …
အချစ်ဆိုတာ (အချစ်ဆိုတာ အနိုင်မယူတာ) ကလေးငယ် ၂ ယောက်ဆော့ကစားနေတယ် ။ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်သူက မိန်းကလေးကို မေးလိုက်တယ် ။ “ဟဲ့… ငါ့ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှာ သကြားလုံးဘယ်နှစ်လုံးရှိသလဲ ပြောနိုင်ရင် …
တစ်သက်လုံးကော်နဲ့ကပ်ထားသလို မခွဲနိုင်အောင်ချစ်​ပြီး လက်တွဲချင်ကြရင် ဒီနည်းလေးသုံးလိုက်ပါ
Relationship တစ်ခုမှာတော့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်ပေးဖို့နဲ့ ယုံကြည်ပေးဖို့ပါပဲ …. ။အဲ့လို နှစ်ယောက်သားနားလည်မူနဲ့ ယုံကြည်မူအပြည့်ရှိနေရင် တစ်သက်လုံးကော်နဲ့ကပ်ထားသလို မကွဲတော့ပါဘူးနော် ….. ။ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ မခွဲတမ်းအတူရှိနေချင်ရင်တော့ စိတ်ကိုဖွင့်ထားပါ …
မချစ်ပါနဲ့ ….. ကိုယ့်ထက် သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပိုပီးဦးစားပေးတတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကို ….. မချစ်ပါနဲ့ ….. ကိုယ့်ထက် ဂိမ်းကိုပိုချစ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကို …… မချစ်ပါနဲ့ …… ကိုယ့်ကိုအကြာကြီးပစ်ထားပီး သူလိုအပ်ချိန်မှချစ်ပြတတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကို ….. မချစ်ပါနဲ့ …